Rodeo - Soavaly Noti | Soavaly Noti
Rodeo dia fanatanjahan-tena, tian'ny Shiliana sy amerikana. Izy io dia mirakitra amboletra mitaingina amboadia na bovine bibikely ary manao fanazaran-tena isan-karazany, toy ny ohatra manipy ny tadiny, rejonear sns. Ary tsy namono ilay biby foana. Akanjo sahaza no horaisin'ilay mpitaingina mba hampiharana ny fanatanjahantena.
Dinihina fanatanjahan-tena mampidi-doza izay azo zahana ihany olona nomanina ho amin'izany, satria raha sanatria ka atsipazin'ilay biby any amin'ny rivotra isika dia tsy maintsy miomàna tsy handray risika.
Ao amin'ity habaka ity no hahitanao karazana torohevitra, pitsopitsony, fitaovana, fiofanana sy safidy hafa hankafizanao tsara ny rodeo. Tsarovy fa ny fampahalalana dia hery ary arakaraka ny ananantsika, raha mbola mifanipaka izy io dia afaka mankafy tsara kokoa izay rehetra tiantsika.
ny Maria hace 9 taona .
Hotantarainay aminao ny sasany amin'ireo toetra mampiavaka ny rodeo Shiliana. Manana ny fitsipiky ny Federasiona Rodeo ...